Reolink Argus 3, igwe onyunyo onyunyo zuru oke | Akụkọ akụrụngwa
Reolink Argus 3, igwefoto onyunyo zuru oke
Ndị ụlọ ọrụ Asia Na-echegharị Ọ na-arụ ọrụ na nke a ruo ọtụtụ afọ na igwe foto dị mma maka nchebe ụlọ gị na ụdị echiche ọ bụla na-abata n'uche. Enweghi ike ịhapụ mwepụta ọhụụ ya na weebụsaịtị anyị, ebe anyị na-edebe gị ozi oge niile gbasara ụlọ ejikọtara.
Choputa n’ime anyi ike ya nile, uru ya na ihe ọghọm ya. Echefula ihe omimi a nke oma.
3 Reolink ngwa na ntọala
Reolink kpebiri ịkụ nzọ na ịga n'ihu na ngwaahịa a. Agbanyeghị na ọ nwere akwụkwọ ọhụụ dị mkpa gbasara Argus 2 nke anyị na-enyocha ebe a, nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmatụ a na-amata nke ọma na ngwaahịa ya niile. Oge a anyị nwere ngwaọrụ nwere ihu dị larịị nwere mkpuchi ojii, ebe azụ dị kọmpụ na-acha ọcha na-acha ọcha. ebe anyị nwere ike ịhụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Maka azụ, mpaghara magnetized nke ga - enyere anyị aka itinye ya na nkwado ya dị iche iche nke anyị ga - ekwu maka ya ma emechaa.
Nha: 62 x 90 x 115 mm
Ọ bụ n'ihu ebe LEDs dị, ihe mmetụta ndị ọzọ na teknụzụ raara nye ihe oyiyi. Na azụ bụ ebe anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri microUSB nke na-eje ozi maka ike ọkọnọ, ntọala nrụnye na ọkwa okwu na-ezi ozi. Anyị nwekwara bọtịnụ "tọgharịa" na ntọala yana bọtịnụ ngbanye / gbanyụọ na ọdụ ụgbọ mmiri maka kaadị microSD anyị nwere ike ịnweta site na ngwanrọ ahụ.
Nkwụ, dịka anyị kwuru, na-ewere site na nkwụnye magnetized nke ga-eme ka anyị tinye igwefoto n'ọtụtụ akụkụ na-enweghị nnukwu mgbalị.
Ihe mmetụta sensọ Starlight CMOS bụ maka na akada oyiyi, ike nke àjà mkpebi nke 1080p FHD na ọnụego, ee, naanị 15 Fps. Recordeddị vidiyo e dekọrọ edekọ ga-adị nnọọ mma ma dakọtara, H.264.
Na nke a igwefoto nwere ikiri n'akuku nke 120º na ojiji ezi a mgbagwoju n'abalị ọhụụ usoro na oji na ọcha site na LEDs infrared isii nwere ikike ịhụ ihe ruru mita 10, yana sistemu ọhụụ abalị nke agba abụọ LEDs 230 lm nwere ụda 6500 K nke ahụ ga-enye anyị afọ ojuju ruo mita iri.
Anyị nwere nkwalite mbugharị dijitalụ zuru oke nke isii site na ngwa eji. Maka akụkụ ya, o nwere igwe okwu na ekwu okwu nke ahụ ga-enyere anyị aka ịnwe ọdịyo n'akụkụ abụọ ahụ ma jiri ya dị ka nkwurita okwu. N'akụkụ ya, ọ nwere sistemu nchọpụta mmegharị "PIR" nwere nso ya ruru 10 mita n'akụkụ 100º.
Ọ nwere njikọta WiFi na-arụ ọrụ na netwọk 2,4 GHz na nchekwa WPA2-PSK. Na ọkwa teknụzụ na ngwaike, nke a bụ ihe niile anyị nwere ikwu maka igwefoto a, bụ onye ọhụụ ya gbasara ụdị nke gara aga dị obere, mana zuru oke iji bụrụ ngwaahịa mara mma. N'ikpeazụ, igwefoto a dakọtara na ụlọ ejikọtara Google Assistant.
Reolink ngwa na ntọala
Ngwa Reolink na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enye ezigbo njirimara onye ọrụ yana arụmọrụ dị mma na iOS na gam akporo, opekata mpe na ule anyị nwere ike ịme:
Budata maka iOS
Budata maka gam akporo
Ngwa a ga - enyere anyị aka ijikọ igwefoto ozugbo, ma site na WiFi ma site na ekwentị mkpanaaka. Anyị nwere ike si otú a hazie ike ndị ọzọ yana ịlele vidiyo ndị echekwarala na kaadị ebe nchekwa. N'ime ndị ọzọ, ndị a bụ ikike kachasị amasị nke ngwa ahụ:
Mee ka usoro ihe ngagharị rụọ ọrụ na-ebute igwefoto naanị mgbe ọ chọpụtara ya
Nweta ndụ ma duzie ụda na vidiyo nke ihe na-eme
Soro ọkà okwu na-ekwupụta site na ekwentị
Rịba ama nke ngagharị akwụkwọ
Nchekwa nke ikpeazụ 30 sekọnd mgbe awụgharị a ngosi
Batterydọ aka ná ntị batrị dị ala
Gbanye akpaghị aka, gbanye ma gbanyụọ
O bu ihe nwute na anyi aghaghi igabiga ngwa ya maka udiri oru nke igwefoto vidiyo. n'agbanyeghị nke a, mesie ezi imewe ike na kachasị software o nwere.
Argus 3 a sitere na Reolink bụ nzọụkwụ na-aga n’ihu site n’ime ka igwefoto dịkwuo nkenke, na-enye anyị ohere nke ịpụ maka ogwe igwe nke ga-eme ka ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ mgbe niile, n’agbanyeghi ụgwọ batrị ya gụnyere. Obi abụọ adịghị ya, ụzọ ọzọ na-adọrọ mmasị na ụdị Reolink nke ngwaahịa na-eto nke nta nke nta, ị nwere ike inweta ya na Amazon site na euro 126.
Ihe na: Mee 28 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 23 nke 2021
Ọ dịghị ihe nkesa na-
Enweghị ndị ọzọ fps
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Reolink Argus 3, igwefoto onyunyo zuru oke
Ọkụ HD 10, mbadamba nkume Amazon na-eme ka ọ dịkwuo ike ma na-egbukepụ egbukepụ